Fifandraisana nomerika mifanaraka amin’ny filàna sy ny zavatra eo an-toerana iainan’ireo vondrom-piarahamonina lavitr’andriana ao Amazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2021 16:08 GMT
Ao anatin'ny tetikasa “Fampifandraisana ireo tsy mifandray: Fanohanana ireo tambajotran'ny vondrom-piarahamonina sy ireo fandraisana andraikitra hafa mitodika amin'ny fampifandraisana vondrom-piarahamonina”, tamin'ny 2019 dia 11 ireo hetsika tambajotram-bondrom-piarahamonina voafantina hahazo ny “fanohanana ara-bola ho fanovàna”, nikendrena hanampiana ireo fampiasàna naraham-pamoronana, maharitra sy mijery ny miralenta, ireo fampandrosoana sy fakàna ny teknolojia ho entina manome hery ny hetsika tambajotram-piarahamonina iray maharitra sy marolafy. Fa indrindra, ireny fanohanana ara-bola ireny dia nikendry ny hitrandraka ireo hetsika izay nampandroso ireo tambajotram-piarahamonina manodidina ny anjara toerana raisin'ny vehivavy ao anatin'ny tambajotra, ny rafitry ny fiarahamiasa ahafahan'ireo vondrom-piarahamonina miparitaka hiaraka hiasa amin'ny alàlan'ireo fitaovana manana loharano misokatra, manatsara ny fahafahana miditra amina sehatra midadasika, ny fandrafetana votoaty avy ao an-toerana ary ny famoronana teknolojika. Azonao atao ny mijery ato ireo antsipirihany misimisy kokoa amin'ireo karazana endrika samihafan'ny hetsika notohanana ara-bola.
Zaranay ny tantaran'ireo fikambanana mandray anjara amin'ny fisiana fiantraika eo an-toerana ateraky ny asa ataon-dry zareo miaraka amin'io fanohanana ara-bola io. Asongadin'ity tantara ity ireo vokatry ny tetikasa iray niarahana nanatontosa tamin'ny Instituto Socioambiental (ISA) sy ny Brazilian Association of Digital Radio (ABRADIG), izay niaraka niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina vazimba teratany sy ny tao an-toerana, indrindra fa ireo vehivavy, ny tanora ary ireo tafiditra amin'ny hetsika ‘permaculture’ (fambolena tsy tapaka ny zavatra ilaina), mba hiaraka hanorina rafitra fifandraisana nomerika iray manaraka lalan-jotra roa (manokana tamin'izany ny mandeha amin'ny onjampeo avo na HF ) izay mamaly ny filàn-dry zareo sy ny zavamisy ao an-toerana no sady mahatakatra ny filàn-dry zareo miditra amina fahalalàna sy fifandraisana nomerika. Afaka jerena ato ny famaritana ara-teknika ny tetikasa. Tany am-boalohany ilay tantara dia nosoratan'i Isabel Harari tamin'ny fiteny pôrtiogey, ary navoaka tao amin'ny tranonkala ISA sy naverina navoaka eto ho ampahany amin'ny fiarahana miasa eo amin'ny APC sy ny Rising Voices.
Amin'izao fotoana izao ireo vondrom-piarahamonina Beiradeiro (amoron'ony) avy ao amin'ny Fari-pitrandrahana Arovana ao Terra do Meio, ao Pará, Brezila dia afaka mandefa antontan-kevitra amin'ny alàlan'ny rafitra onjampeon-dry zareo noho ny fiarahamiasan'ireo vondrom-piarahamonina sy ny Fikambanan'ireo Onjampeo Nomerika ao Brezila (ABRADIG). Ilay rafitra revôlisiônera fampitàna rakitra nomerika, antsoina hoe HERMES, dia manome fahafahana hanana fifandraisana tsara antoka hifanakalozana lahatsoratra sy sary ao anaty faritra iray mirefy an-jatony kilaometatra, anaty faritra iray izay ny fampielezampeo no iray amin'ireo fantsona fifandraisana tena miasa.
Nanamboatra mpanelanelana iray ny ABRADIG mba hanamoràna ny fifandraisana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana. “Ny vahaolana fifandraisana amin'ny onjampeo nomerika fohy narafitray no hany iray azon'ny rehetra idirana aloha amin'izao fotoana izao ho an'ny faritra Amazôna. Ampiasain'izy io ny fomba ara-teknika tsara indrindra fanaovana ‘modulation’ sy tambajotra ho an'io karazana fifandraisan-davitra io,” hoy ny nohazavain'i Rafael Diniz, ilay tena nanao ny fandrafetana sy namokatra ilay rafitra onjampeo.